Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Perr Schuurs Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Perr Schuurs 'na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezin’ulo ya, enyi nwanyi / nwunye ya ibu, ibi ndu, uru di na ndu nke onwe.
Iji mee ka ihe doo anya, anyị nwere ebe a - mmebi nke akụkọ ndụ ya, site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ onwe gị sie ike, nke a bụ oge ọ bụ nwata rue ebe a na - eto eto - nchịkọta zuru oke nke Perr Schuurs Bio.
Ikekwe, ị nụrụ aha ya na nke mbụ ya Liverpool malitere nyochaa onye na-agbachitere Ajax iji jupụta akpụkpọ ụkwụ nke ndị merụrụ ahụ Virgil van Dijk - (n'oge mmalite oge 2020/2021 EPL). Mana ma eleghị anya, ịgụbeghị akụkọ ndụ ya. Ugbu a, na-ebughị ụzọ, ka anyị bido.
Perr Schuurs Nwatakiri Akụkọ nke:
Maka Biography Starters, ọ na-aza aha otutu 'Virgil van Dijk ahụ ọhụụ'. A mụrụ Perr Schuurs na 26th nke November 1999 nna ya, Lambert Schuurs na nne ya, Monique Schuurs na obere obodo Nieuwstadt, Netherlands.
Ndị Dutch na-agba ọsọ bụ naanị nwa nwoke n'ime ụmụ atọ (nwoke na ụmụ nwanyị abụọ) ndị mụrụ ya mụrụ. Monique, nne ya, na-egosi na ọ dị na njedebe 40s mgbe Lambert, nna ya, na 50s.
Perr Schuurs nọrọ na nwata ya na obodo nta ya bụ Nieuwstadt, ya na ụmụnne ya nwanyị abụọ - Demi na Fleau.
Dika amuru nwa ma obu nwa nke ezinulo ya, Perr tolitere hu onye obula nke umu ya ka ha bi ndu ndu di nma, nke n’eme ka itinye egwuregwu. Uzo di otua bu ihe mbu nke gosiputara akara aka ya.
Ezigbo Ezinụlọ Perr Schuurs:
Lee nnukwu ezinụlọ ụlọ azụ Center si abịa! Dị ka Ihe ize ndụ Eden ezinụlọ, onye ọ bụla nọ na ezinụlọ Perr nwere akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ tinye onwe ha na egwuregwu kachasị elu.
Nna ya (Lambert), na nke mbụ, bụ akụkọ akụkọ banyere bọọlụ aka na otu oge dị anya na-agba ọsọ. Mama ya Monique sonyekwara na egwuregwu - Maze.
Lambert na nwunye ya Monique anaghị amanye ụmụ ha ọrụ ha. Ha kwere Fleau, Demi na Perr ka ha nabata egwuregwu ha họọrọ.
Mgbe Perr họọrọ football, nwanne ya nwanyị nke okenye Demi banyere na Tenis. Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ (Fleau Schuurs) weere ọrụ nna ya.
Kedu ezinụlọ na-egwu egwuregwu. Demi (n'aka ekpe) dị na Tenis, Perr (n'etiti) bụ bọl na Fleau (n'aka nri) na-eme bọọlụ.
Ebe azụ azụ si Nieuwstadt, obere obodo nwere ihe na-erughị mmadụ 3088. N'ime obodo a, ndị ezinụlọ na-akpọ onwe ha otu ezinụlọ zuru oke.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ebe ezinụlọ Perr Schuurs si (Nieuwstadt) na-eje ozi dị ka ngafe ókè n'etiti Netherlands na ọwụwa anyanwụ nke Germany.
Perr Schuurs Akụkọ nke Football - Nchọpụta Ọrụ:
Ná mmalite, onyeisi ezinụlọ (Lambert Schuurs) chepụtara atụmatụ ga-eduga ụmụ ya ịnọgide na-ebi ndụ nrọ ezinụlọ ya mgbe ya na nwunye ya (Monique) lara ezumike nká.
Otu ụbọchị gọziri agọzi, Lambert kpọọrọ Perr na ụmụnne ya ndị nwanyị (mgbe ha dị obere) gaa n'ụlọ egwuregwu na Sittard, obodo dị na Netherlands.
Perr dị afọ abụọ - Lambert chetara. O nwere ike ịga ije ma ọ mara otú e si emeso bọl ahụ. O nwere ikike ịzụlite egwuregwu.
N'ezie, nchọpụta talent emeghị Perr. N'ụlọ ikpe ahụ, Fleau nwere ụbọchị na akara aka ka ya (oge ahụ gọziri agọzi) hụrụ bọọlụ aka wee kwenye ịgbaso nzọụkwụ nna ya - bụrụ onye na-egwu bọọlụ aka. Demi makwaara Tenis.
Ka obere Onye Ọgbọ tolitere na nwata, ọ hụrụ onwe ya ka ọ na-eri ọtụtụ echiche egwuregwu nke ezinụlọ ya.
Ọ bụ ezie na o mere ụzọ egwuregwu dị iche, nwata ahụ dị umeala n'obi mụtara ọtụtụ ihe n'aka ụmụnne ya ndị nwanyị na nna ndị ọ na-ewere dị ka arụsị ya.
Ndụ Ndụ Ochie - Inweta Publicghọta Ọha na Nwata:
Mgbe ọ dị afọ anọ, nwatakịrị ahụ nwere ịnụ ọkụ n'obi nwetara onwe ya na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ndị ntorobịa nke FC Ria, otu òtù egwuregwu football na obodo ya.
N'ebe ahụ ọ malitere dị ka onye na-eti ihe, mgbe nke ahụ gasịrị, otu nnukwu ìgwè, Fortuna Sittard, jidere ya na 10.
Rkpụrụ football na àgwà ndị na-abụghị ịgba bọl nke Perr dị obere dị ka nwatakịrị. Ọ bụ nwa ewu gosipụtara àgwà idu ndú pụtara ìhè n'ikwu okwu n'ihu ọha.
Anyị nwere ihe akaebe nke obi ike nwata. Iji malite, nke a bụ otu ihe akaebe vidiyo - oge ọ gwara ndị mmadụ nnukwu okwu banyere ọdịnihu ya. Perr kwuru n’ihu ndị mụrụ ya na ndị òtù ezinụlọ ya.
Site n'oge ahụ okwu Perr ya, ezinụlọ ọ bụla bịara ihe omume ahụ maara na ọ ga-eme ka ọ buru ibu na ndụ ọrụ ya.
Perr Schuurs Biography - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'ikpeazụ, kpakpando ahụ na-arị elu hụrụ ya onwe ya na-enwe ọganihu dị jụụ site na ọgbọ dị iche iche nke Fortuna Sittard. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, Perr gbanwere ọnọdụ, onye mbụ gbanwere ebe nchekwa.
Mgbe onye nchịkwa ya hụrụ ụzọ o si eto ngwa ngwa na ogologo (6ft 3 sentimita asatọ n'ịdị elu), A na-ezigara nwata ahụ ka ọ bụrụ onye na-agbachitere- tupu agụmakwụkwọ gụsịrị akwụkwọ.
Ruo oge isii, Perr nyeere ha aka ịghọ ndị mmeri n'oge anọ. Mgbe ọ dị afọ 17, onye isi na onye nkụzi ya mere ya ka ọ bụrụ onye isi nke Fortuna Sittard, Sunday Oliseh (onye bụbu onye nkuzi na ndị bọọlụ Naịjirịa).
N'oge ahụ, ọ na-etinye egwuregwu ahụ na agụmakwụkwọ ya - na-enyocha ule ikpeazụ ya na Dacapo College na Born - obodo dị na Netherlands.
Ilekwasị anya na agụmakwụkwọ na football anaghị egbochi arụmọrụ ya n'akụkụ abụọ. Dịka onye isi ụgbọ mmiri, Perr duziri ndị otu ya n'ibuli iko nke anọ ya. Ihe nkwado ahụ kwalitere ha na ọkwa nke abụọ kachasị elu nke football na Netherlands.
Ihe egwuregwu a na-echefu echefu na Fortuna Sittard:
Mgbe ihe ịga nke ọma dị na ya nwere, oge mmetụta uche bịara mgbe Perr ga-ekwu ọfụma ya. Nke a na-abịa mgbe enwere mmasị na klọb ndị isi nke Europe (Ajax, Bayern, Dortmund wdg) ndị chụrụ mbinye aka ya.
Nke bụ eziokwu bụ na ọ dịghị ebe ka mma isi kwuo okwu karịa n’obodo ebe ọ toro.
You maara egwuregwu ikpeazụ nke Perr na Fortuna Sittard bụ egwuregwu pụọ megide FC RIA (ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nwata ya). Na ihu ọma ndị otu ya, egwuregwu ahụ mechara jiri akara ikpeazụ na 0-10 (mmeri nke Fortuna).
Mgbe egwuregwu ahụ gasịrị, na ọnụnọ nke ndị mụrụ ya Perr Schuurs, ndị ezinụlọ ya na ndị obodo ya, nwatakịrị ahụ nwere mmetụta uche hapụrụ ubi ahụ na ifuru n'aka ya na anya mmiri n'anya ya. Kedu ụzọ ị ga-esi gaa nke ọma na Fortuna.
N'agbanyeghị na ha meriri ụlọ akwụkwọ mmuta nke obodo ya - FC RIA (0 - 10), ndị agbụrụ ha ka gbara ya gburugburu iji nweta akpaaka ya.
Perr Schuurs Successga nke Ọma Akụkọ:
Mgbe mkparita uka na Liverpool dara, nwa (na 2018) họọrọ Ajax nrọ ya - nke ọtụtụ ndị na-elekarị anya dị ka ebe a na-azụlite maka talent obodo na nke ụwa.
N'ihe na-erughị otu afọ, A hụrụ Perr Schuurs dị ka 'De Ligt ọhụrụ' nke Ajax. Akpọrọ ya dị ka ụdị CB nke edepụtara mgbe otu onye na ndị na-awakpo ya, nke ọma na bọl, na-agụ egwuregwu ahụ nke ọma.
Dị ka n'oge ọ na-ede Perr's Schuurs Biography, ike ya na-agbachitere emeela ka ọ bụrụ nhọrọ maka Dutch National Team. Na mgbakwunye, ọ bụ ugbu a (ọzọ) ndị isi nchịkwa na-agba ọsọ na European football.
Liverpool Jurgen Klopp ga-enwe, obi abụọ adịghị ya, ga-enwe a agha na aka ya iji nweta Perr. Nke a na-abịa mgbe klọb ahụ kwurịtara nne na nna ya ọtụtụ mkparịta ụka ka ha hapụ nwa ha ka ọ jupụta ohere nke onye merụrụ ahụ hapụrụ Virgil van Dijk.
Ihe ọ bụla mere, Perr ga-enwe ngọzi nke Ajax. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ọnye na-bụ Perr Schuurs 'Girlfriend?
N'azụ ndị ọgba bọọlụ na-aga nke ọma, e nwere WAG mara mma - onye bụ nwunye ya. Roos Wijnands bụ enyi nwanyị Perr Schuurs.
Ha abụọ malitere ịhụ onwe ha n'anya nke ukwuu wee maa ihe kpatara ya? Began ha bidoro ịlụ kemgbe ha bụ nwata.
Lee, Roos Wijnands na Perr Schuurs n'oge ha dị afọ iri na ụma (afọ 12). Dabere na Perr, nke a bụ ebe ha zutere na nzukọ ha bụ ịhụnanya n'anya mbụ.
Kedu ihe nwunye Perr Schuurs (Roos) na-akpata?
Dabere na profaịlụ Facebook ya, ọ na-arụ ọrụ na Wijnands Bouwmaterialen. Achọrọ m okwu ahụ 'Wijnands Bouwmaterialen' na google wee chọpụta na ọ bụ ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ. Ọ bụ ụlọ ọrụ ezinụlọ nke ndị mụrụ ya nwe.
Dị nnọọ ka Perr, nwunye ya ịbụ - Roos bụkwa keisi ocha. O nwere anya mara nma, na-atabi anya ma towa ezigbo mma.
N'ọnwa Ọgọstụ 2017, Nwanyị nwanyị Perr Schuurs mere emume ncheta ọmụmụ ya nke iri na asaa n'ụdị dị ukwuu. Roos Wijnands bụ 20 dị ka mgbe anyị dere Bio's enyi ya nwoke.
Nke a pụtara na Perr dị ọnwa ole na ole (ihe na-erughị otu afọ) karịa enyi nwanyị ya. O yikarịrị ka ọ ga-agwa ya ma lụọ ya n'oge na-adịghị anya.
Perr Schuurs Ndụ Nke Onwe:
Mata ihe ndị ọ na-eme na pitch ga-enyere gị aka ịmatakwu nke Long Shot Taker. N'ihi ya, ajụjụ… Ọnye na-bụ Perr Schuurs?
Nke mbụ, mgbe ọ na-anọghị na bọl, ọ na-elekwasị anya na ọmụmụ ihe ya. Dị ka Kai Havertz, Per dị oke egwu banyere ịgwakọta ọrụ ya na agụmakwụkwọ.
Ọzọkwa, ọ na-enwe mmasị iso nwunye ya na-eme ihe ntụrụndụ ka ọ bụrụ, ndị enyi na ezinụlọ. Perr bụ nwa nwoke nwere nsọpụrụ, onye na-eme nke ọma ma nwee mmekọrịta mmekọrịta nwere nnabata agwa. N'ihi Roos Wijnands, ọ na-agbanye ala ma nwee ọ beingụ iso ya nọrọ n'ụlọ.
Perr Schuurs Ndụ:
Onye na-agbachitere na-anwa ike ya niile izere magazin ndị ahụ na-egbuke egbuke nke ọnụ ọgụgụ dị oke ọnụ (ụlọ), ụgbọ ala wdg. Nne na nna na enyi nwanyị Perr Schuur hụrụ na ọ na-eme ihe ọkụ ọkụ.
N'agbanyeghị na ọ tọrọ ya ala, ma ndị hụrụ ya n'anya ka na-ewepụta oge kpori ndụ na ewu ewu n'akụkụ mmiri na njem nleta. Ikpe ikpe site na ego ya, Perr Schuurs nwere ọnụọgụ ruru ihe ruru nde Euro 3.5.
Perr Schuurs Ndụ Ezinụlọ:
Na ezinụlọ ebe ihe niile na-eme ka ị nweta mmeri, ọ dị mfe ịkọkọ otu esi akpachi anya.
N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị eziokwu ndị ọzọ gbasara nne na nna Perr Schuurs na ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ.
Eziokwu banyere nne Perr Schuurs:
Dị ka nwa ya nwanyị (Demi) kwuru otu oge, mama ya (Monique) bụ ikike nke ezinụlọ. Ọ bụ ọkachamara na ezumike nká lara ezumike nká bụ onye mechara nwee ọkaibe na egwuregwu egwuregwu ahụ.
Ka ọ dị ugbu a, Monique na-enwe obi ụtọ ịnọ n'etiti ndị nne ole na ole zụlitere ụmụaka na-egwu egwuregwu (Demi, Fleu na Perr).
N’ilekọta egwuregwu ya anya, ọ na-elekwasị anya na ịhazi ihe niile maka onye ọ bụla dịka ịsa akwa na ụdị ndị ọzọ nke idobe ụlọ. Nye nwunye Lambert, ndụ ugbu a bụ maka idebe ezinụlọ.
Eziokwu banyere Nna Perr Schuurs:
Amụrụ na 15th ụbọchị nke Ọktoba 1962, Lambert Schuurs bụ onye lagoro ezumike nká na-agba ọsọ ogologo oge na bọọlụ aka na 312 okpu mba nye aha ya.
Ọ bụ, ugbu a osote onye nchịkwa nke Limburg Lions, otu egwuregwu bọọlụ na Netherlands. N'okpuru ebe a bụ nna dị mpako nke atọ n'oge egwu ya.
Dịka onye ọsụ ụzọ nke egwuregwu na ezinụlọ, Lambert bụ ọrụ maka ịkụnye ịhụnanya nke egwuregwu nye ụmụ ya - na-enye ha nnwere onwe ịhọrọ akara aka ha.
Dị ka nna na onye bụbu onye egwuregwu kachasị egwu, ọ na-agbasochi egwuregwu egwuregwu nke ụmụ ya niile ruo oge. Lambert nwere mmasị ijikwa ọrụ nwa ya n'ụzọ dị mfe, ọ na-akpachara anya ịghara ịkatọ ndị mgbasa ozi.
Lambert bụ ụdị nna na-ekwe ka ụmụ ya leba anya n'akụkụ ụfọdụ nke ọrụ ha na-enweghị enyemaka ndị nnọchi anya. N'okwu ya…
“Mgbe Perr nọ na agụmakwụkwọ, ekwere m ka ahapụ ya naanị ka o kwere mee yana na ọ naghị eso ndị nnọchi anya nọdụ na tebụl kwa ụbọchị. Ana m agbalị ịchọpụta nke a, iji jidekwa n'aka na o nwere ụkwụ abụọ n'ala. ”
Banyere ụmụnne nwanyị Perr Schuurs:
Maka ndị na-agba ọsọ Dutch, inwe Demi na Fleu dị ka ịnwe ezigbo ndị enyi abụọ ị nweghị ike iwepụ. Mụnne, ndị e sere n'okpuru, bụ ụmụnne ya nwanyị abụọ na-egwu egwuregwu. Ha niile nwere otu egwuregwu ahụ na-asọ n'etiti obi ha.
Zute Perr Schuurs 'Nwanyị, Demi (n'aka ekpe) na Fleau (n'aka nri).
Nwanne nwanyị Perr Schuurs Fleau nọ na bọlbụ aka n'ọkwa ọkachamara na Sittard. N'aka nke ọzọ, Demi bụ onye na-egwu egwuregwu tennis bụ onye mechara họpụta No12 n'ụwa site na okpukpu abụọ (Machị 2020 stats).
O nwere asọmpi WTA atọ na kọmitii ya ma na-ebipụ karịa ndị ezinụlọ ya n'ihi ọrụ ya, nke gụnyere ịga ọtụtụ njem.
Perr Schuurs Eziokwu Eziokwu:
Eziokwu nke 1: Akụkọ Liverpool Mbụ:
Na oge 2018/2019, Perr gara na ndị bekee nwere ike ịnwale ọnwụnwa. Nke a bụ ọbụna tupu ya abanye na Ajax.
You maara?… Liverpool kwadebere ya nnwale siri ike maka ya site n'ịkpọ oku Steven Gerrard site na ezumike nká ka Perr nwee ike ihu ya iji chọpụta akara aka ya.
Mgbe o meriri n'ọgụ ahụ megide Steve-G, Liverpool nyere ya salary 900,000-a-ụgwọ kwa afọ. N'ụzọ dị mwute, mkparịta ụka ọzọ ha na ndị mụrụ Perr Schuurs mebiri.
Nke a bụ tupu Lambert na Monique kpebiri na nwa ha nwoke kwesịrị ịga kpọọ Ajax.
Eziokwu nke 2: Ụkpụrụ FIFA:
N'ihi na nwata, Perr nwere ezigbo akụkọ FIFA. Ọ bụ isi abụọ dị n’elu Ryan gravenberch, onye obodo ibe ya na onye otu. Na-ekpe ikpe site na ikike ya, Perr bụ FIFA magburu onwe ya ọ bụla njikwa njikwa ọrụ ọ bụla ga-azụta.
Eziokwu nke 3: Nkwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ na ụgwọ kwa sekọnd:
Gwọ ọnwa na Euro (€).
Kwa Afọ € 2,519,838
kwa ọnwa € 209,987
Kwa Izu € 48,384
Kwa .bọchị € 6,912
Kwa elekere € 288
You maara? Average nwa amaala na Netherlands ga-arụ ọrụ maka 1 afọ na ọnwa 3 iji mee ka ụgwọ ọrụ ya kwa izu bụ, 48,384.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Perr Schuurs'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu nke 4: Okpukpe - Ọ̀ Bụ Onye Kraịst?
Mgbe anyị nyochachara, anyị ghọtara na aha ezinụlọ Per Schuurs ahụbeghị na Akwụkwọ Nsọ, Torah na Quran.
Yabụ, anyị ewepụla ohere ịme ya Onye Kraịst ma ọ nweghị akara aka nke nkwenkwe okpukpe ọ bụla.
Site na mmalite, nne na nna Perr Schuurs mere atụmatụ inwe ezinụlọ egwuregwu na-aga nke ọma ma nwee ọganiihu.
Omume nke ụlọ agbanwebeghị ma taa, Lambert na Monique dị mpako ịmara na Perr, Demi na Fleu na-ebi nrọ ha.
Ihe omuma nke Perr Schuurs na-akuziri anyi ka anyi ghota na elekwasiri anya, mkpebi siri ike na nkwekorita bu isi ihe na-eme nke oma.
Nke a pụtara ìhè na ọrụ ya dị elu ma ọ pụtawo ugbu a ụlọ ndị European kacha elu (etiti na Milan) na-ama Liverpool egwu maka Ajax Defender.
Daalụ maka ịnọnyere anyị ogologo oge na Memoir Perr. Jiri nwayọ rute anyị ma ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu anyị.
Ma ọ bụghị ya, tinye okwu n'ihe ị chere gbasara ndị ọgba bọọlụ. Maka nlele ọsọ ọsọ na Perr Schuurs Bio, jiri okpokoro anyị wiki.
Eziokwu Akụkọ ndụ
Aha n'uju: Perr Schuurs.
Age: Afọ 21 na ọnwa 9.
Ụbọchị ọmụmụ: 26 November 1999.
Ebe amụrụ onye: Nieuwstadt, Netherlands.
aha otutu: New Matthijs de Ligt.
Ndị nne na nna: Lambert Schuurs (Nna) na Monique Schuurs (nne)
Ụmụnne: Fleau Schuurs (nwanne nwanyị okenye) na Demi (nwanne nwanyị okenye).
Ọnọdụ n'ime ezinụlọ: Ọnọdụ n'ime ezinụlọ:
Ogo na ụkwụ na sentimita asatọ: 6 ụkwụ 3 sentimita
Ogo na mita: 1.91 m.
-arụ: Egwuregwu Bọọlụ:
Ọrụ Nna: Onye isi ala lara ezumike nká.
Ọrụ mama: Onye ọkachamara lara ezumike nká Maze.
Mụnna nwanyị ọrụ: Fleau na-egwu bọl na Demi na-egwu egwuregwu tennis.